FOUR « MMWeather Information BLOG
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ မုန်တိုင်း FOUR-04B follow-up
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း FOUR(04B)သည် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း(TS) အဆင့်ဖြင့် အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် အားအကောင်းဆုံး အခြေအနေ(ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 60 knots = 69.05 mph to 75 knots = 86.30 mph)သို့ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
မုန်တိုင်း 04B သည် နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များ(JTWC မှ သတိပေးထုတ်ပြန်ချက် #3)အရ မုန်တိုင်း ဗဟို၌ လှိုင်းအမြင့် ၁၂ ပေ ရှိပြီး လေတိုက်နှုန်း 50 to 65 knots(57.54 mph to 74.80 mph) . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ မုန်တိုင်း FOUR-04B follow-up
One comment Uncategorized 04W မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီ
Leaveacomment Uncategorized ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း GIRI – အဆင့်-၂ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာပြီ
6 comments Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိ
By mmweather.ygn, on October 21st, 2010%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ယနေ့နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၆ နာရီခွဲအချိန် TSR နှင့် JTWC data များအရ မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာပြီး အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၃ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေပါသည်။ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၄ဝ မှ မိုင် ၅ဝ အထိရှိမည်ဖြစ်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ data များအရ ကျောက်ဖြူမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ၁၉၃ မိုင်ခန့်၊ စစ်တွေမြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၂၁ဝ မိုင်ခန့် နေပြည်တော်၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၄ဝခန့် ၊ ရန်ကုန်မြို့ အနောက်မြောက်ယွန်းယွန်း ၃ဝ၅ မိုင်ခန့် နှင့် ပုသိမ်မြို့ အနောက်ဘက် မိုင် ၂၂ဝ ခန့်တွင် ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေပါသည်။
. . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိ
6 comments Uncategorized Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum